Imisebenzi yehhotela eSri Lanka kufanelekile ukuqala umsebenzi ngaphandle
Fundisa noma iyiphi indawo ye-Randstad Company
Kushicilelwe ngu Dubai City Inkampani at April 21, 2018
Imisebenzi yehhotela eSri Lanka
Imisebenzi yehhotela ku- i-Sri Lanka nge Dubai City Inkampani. Singa manje esisiza ukuthola umsebenzi eSri Lanka. Manje sisebenza nezinkampani eziningana eSri Lanka. Ngalokhu engqondweni, sibhekile phambili ukuthola ama-CV. Ikakhulukazi kusuka kubantu abafuna umsebenzi abavela eSri Lanka. Inkampani yethu yokuphatha izinkontileka eziningana nezinkampani ezise-Asia.
Ukuthola umsebenzi eSri Lanka kungaba inselele, ikakhulukazi kubantu bakwamanye amazwe. Futhi inkampani yethu izobheka imisebenzi eSri Lanka. The Dubai Inkampani Yedolobha umhlahlandlela womsebenzi wezindleko ezintsha. Ngokuqinisekile inikeza ulwazi mayelana nokusesha umsebenzi e-Asia naseMpumalanga Ephakathi. Ikakhulukazi sizama ukukuqondisa emisebenzini yehhotela eSri Lanka. Imisebenzi ye-inthanethi eSrilanka nokuthi ungayithola kanjani indlela efanele. Futhi imisebenzi yesikhashana, futhi sibhala ngemisebenzi ephezulu Izivumelwano ze-Sri Lanka nezimo zokusebenza.
Ukuze uthole imisebenzi yokusebenza eSri Lanka, kufanele ubuke imithombo eminingana. Ukusuka i-classifieds iwebhusayithi lapho ungathola imisebenzi ye-Inthanethi eSri Lanka ukuze uthole izikhundla ezikhona. Noma ngisho nokuthumela isiphakamiso se-CV ngephrofayela yakho. Ngakolunye uhlangothi, uma ufuna imisebenzi yesikhashana eSri Lanka. Kufanele ubuze imibuzo bese wabelana nabanye okuhlangenwe nakho kwakho nabanye abafuna umsebenzi emisebenzini yosesho yendawo zama ukubhuka izingxoxo zokuhamba.
I-Dubai City Inkampani yabasebenzi baseSri Lankan
Noma kungenzeka ube yisizwe? Ufuna ukuphila nokusebenza e-Asia. E-Sri Lanka, ungakwazi ngisho nokusebenza isikhathi esithile nokufunda. Inkampani yethu ikusiza ukuthi uphathe ukusesha kwemisebenzi yansuku zonke eSri Lanka. Dubai City Umhlahlandlela wenkampani ungenye yezinto ezinhle kakhulu zabasebenzi bendawo eSri Lankan. Futhi kubaluleke kakhulu kubantu abafuna umsebenzi e-Dubai kusuka eSrilanka. Konke okudingeka ukwenze ukuthola. Ingabe a umsebenzi wehhotela eSri Lanka kuwe ?.
Uchwepheshe wethu isiqondiso sabasebenzi sizofaka izihloko ezifana nendlela yokuthola i-visa. Indlela yokuthola izindlu ezifanele e-Asia. Imisebenzi ngezimali ezifana nezithuba zokusebenza emabhange aseSri Lanka. Sicela ujoyine umphakathi we-Dubai City Company kubantu abafuna umsebenzi. Futhi thintana nabantu abanjengawe. Thatha umsebenzi kusuka enkampanini yethu bese wabelana ngolwazi lwakho imisebenzi yehhotela eSri Lanka.
Sibutsetelo Semisebenzi eSri Lanka
Kwenzeka kanjani lokho ukuthi uphile futhi usebenze eSri Lanka ?. Uma ucinga imisebenzi eSri Lanka. Kufanele wazi ukuthi kunesilinganiso esikhulu sokungasebenzi. Ngakho abantu belizwe bafuna umsebenzi phesheya. Ngakolunye uhlangothi, akuwona wonke umuntu othola umsebenzi. Ngakho abantu bazama ukuthola imfundo engcono, izifundo ezingcono kakhulu. Eqinisweni, ezimweni eziningi, akusizi okuningi.
Iningi labo abafuna umsebenzi wendawo bayazi ukuthi. Kungakhathaliseki ukuthi uzoba nakho okuhle kanjani. Uzophatha uhlelo lwakho lokusebenza kwezinye izisebenzi eziningi zaseSri Lanka. Ehlangothini elibi abantu abaningi abanolwazi oluhle e-Asia. Iningi labo lingasebenzi ngakho befuna imisebenzi emihle eSrilanka noma basebenze kwamanye amazwe. Futhi, kunezinombolo ezikhulayo zabaphothuli bendawo abafuna imisebenzi ephezulu eSri Lanka. Ngakho-ke, leli zwe liyilo amazing umsebenzi eSri Lanka ikhokhwa kahle ngethuba elihle.
Leli lizwe lisakhula indawo ngoba ibhizinisi. Ungazithola imisebenzi ezithakazelisayo zinikeza. Ngokusho kukahulumeni waseSri Lanka, kukhona isikhala sebhizinisi. Isibonelo, ku-2018 balinganisa abantu abayizigidi ezingu-9.7 abafanelekile ukusebenza. Abafunayo bemisebenzi yabantu abakhulu baqhubeka beyisisebenzi sendawo. Amandla amakhulu eSri Lankan njengabasebenzi baseSri Lanka ezomnotho. Ngakolunye uhlangothi, ngaphezu kwe-90% labantu base beqashwe kakade. Bonke abanye abantu abaqashiwe noma basacwaninga. Ngakolunye uhlangothi, i izinga lokungasebenzi emsebenzini eSri Lanka ingaphansi kwe-4.20 ngamaphesenti ngonyaka we-2018.
Ukusebenza ezinkampanini zaseSri Lanka
Leli zwe libuye libe nesimo sayo sezomnotho. Ngokwalesi sizathu, izinkampani eziningana ezilawula amaphrojekthi amasha iminyaka edlule. Futhi baqala ukuyilawula kusukela ngonyaka we-2000. Lapho ukungasebenzi kwakungamaphesenti angaba ngu-8. Bese bafunda izindlela ezinhle zokwenza umthelela omkhulu. Ngakolunye uhlangothi, i-Sri Lanka isabhekene nesikhathi esinzima sokusebenzisa abantu bayo. Ngakho-ke kungani banciphisa abanye amathuba emisebenzi kubantu basanda kufika.
Ukuthola umsebenzi eSri Lanka njengesisebenzi samazwe ngamazwe. Mhlawumbe imisebenzi enzima kakhulu yokwenza, kodwa nakanjani akunakwenzeka. Ngokwesibonelo, Abadabuli bamaNdiya bathola imisebenzi kuleli zwe kalula. Ukubeka ngenye indlela, ungasebenza eSri Lanka kuwo wonke amathuba njengevolontiya. Kunokunikezwa okuningana, ngokwesibonelo, ongakwenza fundisa IsiNgisi. Ubufakazi obucindezelayo obukhombisa ukuthi uzokwenza okuningi. Ngenkathi ngisebenzela inkampani yaphesheya.
Ukuya eSri Lanka
Kubalulekile ukuqaphela lokho abafuduka ngaphandle. Ikakhulu ngamakhono wokuphatha kanye nesipiliyoni kusuka eMiddle East noma Europe. Impela kuzokwenzeka qala amathuba amaningi emisebenzi ngokuqinisekile ngokushesha kakhulu. Ngaloluhlangothi olubi, imisebenzi eSri Lanka ingcono kakhulu kubaphathi. Okokuqala, ithuba lokuthola lo msebenzi eSri Lanka liphakeme. Ngakolunye uhlangothi, kungcono kakhulu.
Kunezinhlobo eziningana Izinkampani zaseSri Lankan ukuthi ungaqala umsebenzi. Yiqiniso, i-Sri Lanka iyindawo enhle kakhulu kubakhenkethi. Ngaphansi kwalezi zimo, kufanelekile ukusebenzisa izicelo zehhotela eSri Lanka. Ngalesi senzo iningi labantu abafaka isicelo sokuphatha umsebenzi. Ngokuvamile, abaningi baxhuma ngisho naseDairobi. Ukuthambekela ukuthola imisebenzi emkhakheni wokuphepha wangasese ezifana nokungenisa izihambi nokuvakasha. Kunjalo, ungasesha umsebenzi emabhizinisini nakubhizinisi embonini. Futhi imisebenzi emihle ungathola yonke ubudlelwane bamakhasimende. Imikhakha engezansi ingu-engineering, ezezimali nezindwangu, nezingubo.
Ukuphila nemali eSri Lanka
Izinga lokuphila kuleli lizwe kuhle ngokwanele kubantu. Kodwa khumbula ukuthi amaholo azobe ephansi eSri Lanka. Ngisho noma uthola umsebenzi e-Sri Lanka high tech inkampani. Ungalindela imali eningi kakhulu egeleza ku-akhawunti yakho yasebhange. Isibonelo, uma siqhathanisa i-Dubai neLondon.
Ngakho ungaqhathanisi namazwe amaningi aseNtshonalanga. Ngoba kuyimakethe ehlukile yokusebenza uma siqhathanisa ne-Dubai noma i-Abu Dhabi. Ngakolunye uhlangothi, imali ayiyona into embi. Ungathola umsebenzi njengomphathi ophezulu. Isibonelo embonini yehhotela. Futhi ngokuqinisekile ngale ndlela uzokwenza okuningi okuningi.
Ngeke ukwazi ukugcina imali njenge-expat esebenzayo eSri Lanka. Inkampani yedolobha lase-Dubai yenza ezinye izibuyekezo mayelana Nemisebenzi eSrilanka. Futhi ngombiko wethu wemisebenzi eSri Lanka. Kumele thola ukuthi ungathola kanjani umsebenzi e-Asia. Futhi ikakhulukazi ezweni laseSri Lanka.
Imisebenzi ye-Hotel Employment eSri Lanka
Uma uqala umsebenzi. Ngokuqinisekile, umholo wakho kufanele uhlanganise ukuphila okunethezeka. Ukuba nomuzi omuhle nemoto enhle. I Inkampani enhle kakhulu iqasha kuleli zwe.
Futhi izisebenzi eziningi zendawo zithola le misebenzi. Ngokuyinhloko ngenxa yezindleko zokuhlala eSri Lanka. Kuyindawo enhle yokuhlala futhi ngokuvamile ngokujwayelekile indawo enhle lapho ungaqashwa khona. Ukusuka eNdiya kulula kakhulu ukuthola umsebenzi eSri Lanka kunezinye izindawo. Ngasohlangothini oluhle, ungakwazi futhi ukuthola umsebenzi eSri Lanka amathuba amakhono okukhokhelwa kahle. Isibonelo ngezinhlangano zamazwe ngamazwe. Futhi iningi lenhlangano enkulu ekhokhela a imali ephezulu yangaphandle, ngokuhambisana nomholo ophansi ojwayelekile.
Ayikho Imisebenzi eSri Lanka? Qala Umsebenzi ku-Dubai
Ngakolunye uhlangothi, uma uhlala eSri Lanka ungakwazi thola umsebenzi eDubai. Esethu inkampani ekusizeni ukufuna imisebenzi ukuthola Imisebenzi esuka eSri Lanka e-Dubai. Wethu uhlelo lokusesha umsebenzi Kunconywa kakhulu kubantu abavela eSri Lanka. Sisiza abantu ukuthi bathole umsebenzi e-United Arab Emirates. Iningi labafuna umsebenzi inkampani yethu enayo evela eNdiya. Kepha sisiza futhi nokuthola umsebenzi eDubai Sri Lankan abazingeli bamakhono.
Uma ukhona ukufuna umsebenzi e Dubai njengoba Indian. I-United Arab ivulekile izithuba zokuvula. Sisiza abantu abavela emhlabeni wonke ukuthola umsebenzi e-United Arab Emirates. Ikakhulukazi kubantu abafuna umsebenzi e-Abu Dhabi, e-Dubai, futhi Sharjah. Ngakho uma usuka eSri Lanka siyakwazi ukubeka umsebenzi omuhle e-Dubai. Ithimba lethu selivele selivele ngokubeka ngempumelelo abantu basePakistan ne-India. Ngakho ngalokhu engqondweni, ithimba lethu libheke phambili ukukubeka. Konke esikudingayo kusuka kuhlelo lokusebenza lomsebenzi ophelele. Ngakho uma ungakwazi sicela ubhalise imininingwane yakho bakithi Layisha kabusha ingxenye.
Ngakolunye uhlangothi, ungangeza inombolo yakho yocingo kweyethu WhatsApp amaqembu emisebenzi. Futhi inkampani yethu ithatha isicelo sokuqashwa kumakhasimende ethu. Bese ngiyibeka kumawebhusayithi ezokuxhum, naku Amaqembu we-WhatsApp. Ngakho-ke kungenye indlela ehlakaniphile yokuthola imisebenzi e-Dubai nase-Abu Dhabi. Eqinisweni, sisiza abantu ukuqala umsebenzi e-United Arab Emirates.
Yiziphi Umsebenzi Ozozikhetha Kuzo
Umsebenzi wehhotela eSri Lanka
Yikuphi Okulungile Kuwe?
Kufanele uqale umsebenzi eSri Lanka?
Owokuqala wemibuzo enzima kunazo zonke okufanele uzibuze yona. Ngabe imuphi umsebenzi ongcono kimi weHhotela umsebenzi ungilungele?. Ngoba le mikhakha emibili ihamba phambili emsebenzini eSri Lanka. Ngesinye isikhathi, kufanele uzibuze uhlobo luni lomsebenzi lungile kimi ?. Ngingakwazi ngisho nokwenza ukuthi kwenzeke? Kumuntu omusha omusha lokhu kufanele kubaluleke kakhulu. Ngoba impendulo yalo mbuzo Ushintsho olukhulu empilweni yakho. Futhi lapho uthatha isinqumo sokuthi kungifanele ngani. Futhi ngiqala kanjani?
Kepha kubantu abaningi abafuna umsebenzi, inqubo yokufuna umsebenzi ayicaci. Iningi lamafreshi kufanele qala ukufuna umsebenzi ngesikhathi semabanga aphezulu. Futhi, indlela enhle ukulandela inkanuko yemvelo. Kusukela uqala ukuthola izinkanuko zakho. Kufanele uhlangane nabanye abantu abanolwazi. Abanye babo bangakusiza ngempela ukudalula amathuba emisebenzi. Lokho kungaba ngumndeni wakho noma omunye umuntu onolwazi oluningi.
Iyini ukukhethwa kwekhono elihle kakhulu?
Empeleni, uma ufuna umsebenzi. Kufanele utholakale emsebenzini wokuqala olungiselelwe kahle. Siyazi ukuthi umsebenzi wamahhotela kungumsebenzi onzima ukunquma. Awusoze wazi ukuthi yini okungaba ngcono kuwe. Kepha iningi lasekolishi noma iningi lasenyuvesi. Ukulungiselela umsebenzi ojwayelekile, hhayi umsebenzi othize. Kepha onalokhu engqondweni, ukukhetha umsebenzi akupheli. Kusukela uthola ikholeji noma eyunivesithi. Ngamamaki amahle, ungaba neyodwa imisebenzi thina empeleni ihlinzeka abafuna umsebenzi.
Zama ukuthola owakho inqubo yokukhetha umsebenzi. Ngaphambi kokuthi uthathe isinqumo sokuthi ungathanda ukuthola msebenzi muni eSri Lanka. Ngoba abasha abaphothule iziqu ngifuna ukuqala umsebenzi onomthelela omkhulu. Futhi bonke abasebenzi abasebenza kuleli bazophinde bahlole amathuba emisebenzi ehlukene. Thola imisebenzi emisebenzini yehhotela eSri Lanka neDaily City Company.
I-Srilanka amahhotela amahhotela ibhizinisi elikhulu. Kunamahhotela amaningana kuleli zwe. Ungathola umsebenzi esimweni sokuthengisa. Kepha omunye wemisebenzi engcono kakhulu eSrilanka izikhundla zokuphatha. Ngoba uma sizothatha umsebenzi ozonikezwa kuleli. Futhi namanje, qhubeka nokuhlala eSrilanka nakanjani uhlala epharadesi kuyindlela enhle yokuphatha. ESrilanka, siyikho ukuba nomkhiqizo ophezulu okufanele usebenze nawo. Futhi iningi lamahhotela likhona nokuqasha. Kukhona inketho enkulu yokuqasha yabasendaweni. Ukusuka kokuyisisekelo kwabasebenzi bokuqeqesha kuze ezikhundleni zabaphathi abaphezulu. Konke lokho ungakuthola ngenkathi usebenza embonini yamahhotela eSrilankan.
I-Dubai City Inkampani isebenza nezinkampani eziningana zemisebenzi yehhotela eSri Lanka. Ikakhulukazi nalabo abavela emahhotela asehhotela. Ngakolunye uhlangothi, uma ungakwazi ukuthola umsebenzi nathi. Inkampani yethu yenza ucwaningo oluhle kakhulu ehhotela ukuqasha izinkampani eSri Lanka. Kufanele ubuke ukuthi iyiphi inkampani yezimboni zamahhotela eqasha eSri Lanka. Iqembu lethu lizoba ngaphezulu kwalokho ngiyajabula uma uzothola umsebenzi eSri Lanka. Bheka umhlahlandlela wethu wokuthi ungawuthola kanjani umsebenzi ehhotela eSri Lanka.
Thola imisebenzi emisebenzini yehhotela eSri Lanka.
Imisebenzi e-Jetwing Hotels Jobs eSri Lanka
Amahhotela Jetwing eSri Lanka indawo yokuqala ukusebenza. Le nkampani iqasha abaphathi abasha abaningi. Ungaqala i-adventure eSri Lanka nale nkampani. Enye yehhotela elihle kakhulu lomsebenzi ozuzisayo embonini yokungenisa izihambi yaseSri Lanka.
Uma ukhona ngifuna ukukhula ngokushesha okukhulu. Kufanele ucabangele ihotela le-Jet wing ngomsebenzi wakho. Amahhotela aseJetwing angayingxenye yomkhakha wezokuvakasha walesi siqhingi. Ngokwesinye isandla kuchazwa okuningi okusha okushaya le nkampani.
Ngoba nabo ungathola elinye lamathuba amahle kakhulu namathuba. Ngenkathi uzosebenza ngezimanga zemvelo, hlangana nabantu abavela emhlabeni wonke futhi wenze imali enhle. Uma ngabe ilitshe lakho? Nenkampani, uzobe uphefumulelwa njalo. Ngelinye lamahhotela amahle kunawo wonke emhlabeni. Ngaphezu kwalokho, e-Srilanka, leli hhotela laziwa isikhathi eside izindawo zokusebenza. Futhi omunye wemisebenzi engcono kakhulu kwezokuvakasha kanye nokungenisa izihambi.
EJetwing Hotels, kungaphezu kokuziqhenya ngokuba yikhaya lokungenisa izihambi laseSri Lankan. IJetwing Hotels yi ukusiza abasha abaphothule. Ngoba bakholelwa ekubalulekeni kokusekela wonke umuntu omusha ophothule iziqu. The inqubekela phambili yomsebenzi kanye noHlelo Lokuthuthuka nale nkampani ikufanele nje ukuqala. Le nkampani nakanjani izokwenza umthelela wemisebenzi eSri Lanka.
Imisebenzi yehhotela eCinnamon Sri Lanka
Ihhotela lesinamoni linobukhona obuqinile besifunda. Baningi abantu bokufika abasebenza nomkhiqizo wakhe. Kwemisebenzi eSri Lanka, leli hhotela libukeka njengombono ohlakaniphile. Inkampani ukuthuthukisa amaphrojekthi amaningi amasha. Ngakolunye uhlangothi abaphathi bale nkampani abalawula iphothifoliyo ngotshalomali olukhulu. Basebenza ngamagumbi okufundela angaphezu kwe-2400 wezinkanyezi kanye nangaphezulu kweminyaka engu-40 yolwazi lokungenisa izihambi.
Ngokuvamile, ukukhuluma, inkampani ifuna ukushayela ibhizinisi ukunwebeka okuqhubekayo. Unalokhu engqondweni, expats ezintsha zingabekwa. Ngakho-ke uma unothando lokusebenza eSri Lanka. Ikhulukazi embonini yezihambi. Kufanele wenze umsebenzi wakho ne-Cinnamon Hotels & Resorts. Ngoba bahola embonini.
Ihhotela uhlobo lokuphila uhlobo lwemisebenzi eSri Lanka. Ngenkathi uzosebenzisana nabo uzodinga ukuletha okuhlangenwe nakho kwe-Asia yanamuhla. Imisebenzi yamahhotela eSri Lanka nale nkampani yinhle.
Ngale nhlangano, kugxilwe kakhulu kubasebenzi. Ngakho-ke uma ufuna ukujabulela umsebenzi wokuphila eSri Lanka. Kufanele uzame ukungena kule nkampani.
Leli hhotela, ngakolunye uhlangothi, ukuba nethonya elinamandla e-Asia. Ngakho-ke bayazi ukuthi bangaheha kanjani abantu abangahle bakhethwe kuwo wonke umhlaba. Ngenkathi uqala umsebenzi ngehhotela lesinamoni kuzodingeka ukuthi wabelane ngombono ojwayelekile nesinamoni. Iqembu lethu ukweluleka abafuna umsebenzi abasha abafake izicelo zomsebenzi nabo.
Umsebenzi we-Theme Resort & Spa
E-Srilanka, kukhona njalo indawo yabantu abangajwayelekile. Ikhulukazi embonini yamahhotela. Uma ungomunye wabo futhi ufuna umsebenzi. Kufanele unikele insizakalo yakho yobuchwepheshe ku-theme resort & Spa. Ikakhulu uma ungabasebenzi abathengisayo bezentengiso.
Isihloko sengqikithi & i-Spa. Umkhakha wolwazi we-theme uyisihluthulelo sokuphelela. Uma unolwazi oluqinile ngomkhakha wamahhotela. Faka isicelo nge-CV yakho entsha. Ngaphezu kwalokho, abantu abanesifiso sokusebenzela abanye bakhethwa kulolu hambo. Le nkampani kukhuthaza impumelelo ephezulu. Futhi uma ubanikeza amaphesenti akho ayikhulu kubo. Uzovuzwa, nganoma yimuphi umqondo walelo gama.
Empeleni, bona hlinzeka ngosizo oluphelele lochwepheshe. Kusuka ekuqeqesheni umsebenzi nasekufundiseni kuze kufike ekuqeqesheni abaphathi abaphezulu. Kepha labo abafisa ukufinyelela ephakeme kakhulu emisebenzini yabo. Ngiyakwazi faka izicelo zezikhala zemisebenzi yokuphatha ezinamazinga okuphatha kwiwebhusayithi yabo.
Ukuqonda nokukhuthaza abanye emsebenzini ohlukahlukene. Ngale nkampani izokhokha ngokuhlukile. Ngoba akuyona yonke umuntu ukhombisa isimo sengqondo nokusebenza kahle kwamakhasimende. Ungaba nekhono eliphakeme ngaphakathi kwabasebenzi bakwaRthe esort. Kuhle kakhulu ngemisebenzi yamahhotela eSri Lanka.
Ukusebenza nehhotela lase-Mount Lavina
I-Mount Lavina Ihhotela ukuba nesiko eliqinile eSri Lanka. Uma ufuna umsebenzi ngaphakathi embonini yamahhotela iMount Lavinia Hotel kuyisinqumo esihle. Leli hhotela laziwa kahle ngomlando wakhe wamagugu alo amakoloni. Ngaphezu kwalokho, kunabantu abaningi abamangazayo abahlala eSri Lanka basebenza nalolu hlobo. Ngakho-ke, uma ufuna umsebenzi wokuthuthuka oqinile. Ungaba yiqembu lakhe amalungu futhi abe ngabasebenzi abazinikele.
Ngasohlangothini olubi, udinga ukuba namandla wangempela ekusebenzeni kwehhotela. Ihhotela iMount Lavina, lenze leli hhotela laba ngenye yezindawo ezihamba phambili eSri Lanka. Abaphathi behhotela bakholelwa ukuthi kunkulu isibopho maqondana zona. Ngakho-ke konke kudinga ukuba kube sendaweni ethile, noma ngabe yini njengamanje eya ehhotela. Konke kumele kube sendaweni nawo wonke umuntu kumele basebenze kanzima ukuze balondoloze ukusebenza izinga ehhotela.
Ifilosofi eyinhloko yehhotela isuselwa ekuqeqesheni abasebenzi babo. Ngokuvamile ukukhuluma ukukwenza indlela engcono kumakhasimende abo. Iningi labasebenzi babo likholelwa ukuthi amandla wehhotela yiyona nto esemqoka. Ngasohlangothini olubi, i umphathi's ukwakha iqembu labo. Azikho izinto eziningi ezingathuthukiswa. Kuwo wonke umsebenzi osele wale nkampani, kuzoqeqeshwa okushad. Njengoba ujoyina iqembu uzobanika okuningi. Kepha ungalindela kubo ukuthi amalungu amasha azokwandisa okulindelwe. Inkampani enhle kakhulu ye imisebenzi yehhotela eSri Lanka.
Isiphetho seSri Lanka Ihhotela lehhotela
Akunandaba noma yikuphi ukuqeqeshwa nokuzikhandla ozodinga ukukwenza. Imisebenzi emahhotela aseSri Lanka nakanjani thuthukisa impilo yakho. Ikakhulu uma ufuna umsebenzi wesikhathi eside eSri Lanka. Imboni yamahhotela enikeza amathuba amangalisayo. Ukwenza isibonelo, ungaba ngumphangi ngelinye ilanga. Ungaqala umsebenzi eSri Lanka, kepha ungagcina endaweni epholile ngempela njengeDubai noma Abu Dhabi ku- I-United Arab Emirates. Qala Imisebenzi Yehhotela eSri Lanka nenkampani yethu.
IDubai City Company manje ihlinzeka ngemihlahlandlela emihle Imisebenzi eDubai. Ithimba lethu lathatha isinqumo sokungeza imininingwane yolimi ngalunye isisebenzi. Ngakho-ke, unalokhu engqondweni, manje usungathola iziqondiso, amathiphu kanye nomsebenzi e-United Arab Emirates ngolimi lwakho.